फेसबुकमा ५ करोड डाटा लिकको शिकारमा कतै तपाईं त पर्नुभएन ? यसरी चेक गर्नुस् - Everest Dainik - News from Nepal
फेसबुकमा ५ करोड डाटा लिकको शिकारमा कतै तपाईं त पर्नुभएन ? यसरी चेक गर्नुस्
ह्याक भएको आशंकामा रहेका नौ करोड प्रयोगकर्ताले फेरी लग इन गर्नुपर्ने
संसारको सबैभन्दा ठूलो सामाजिक सञ्जाल वेवसाईटमध्ये एउटा हो फेसबुक ।
गत शुक्रबारका दिन फेसबुकका पाँच करोड उपभोक्ताको एकाउन्ट ह्याक भएको समाचार सार्वजनिक भयो । फेसबुकले यसको पुष्टि गरेपछि त्यसरी डाटा लिक क कसको भयो त भन्ने खुल्दुली सबैको मनमा परेको छ ।
विगत १४ वर्षको आफ्नो इतिहासमा फेसबुकमाथि यो सबैभन्दा ठूलो हमला हो । सबैभन्दा सुरक्षित मानिएको फेसबुक एकाउण्टबाट डाटा चोरी गर्नु त्यति सहज काम भने होइन । तर ह्याकरहरुले फेसबुक कोडको एउटा फिचरको फाइदा उठाउँदै युजरहरुको एकाउण्ट प्राप्त गरे ।
याे पनि पढ्नुस फेसबुकमाथि ८ करोड जरिवाना !
यसरी एकाउण्टमा नियन्त्रण गरेलगत्तै फेसबुकले ह््याक भएको कुरा स्वीकार गरेको हो । र, फेसबुकले आफ्नो प्रणाालीमा रहेको कमजोरी सच्च्याइसकेको बताएका छ ।
फेसबुकका तर्फबाट जुन एकाण्टहरुलाई ठीक गरिएको छ, तिनीहरु स्वतः लग आउट हुनेछन् । करिब नौ करोड युजरलाई आफ्नो फेसबुक एकाण्टमा लगिन गर्नुपर्ने छ ।
यदि तपाईको एकाण्ट पनि तपाईले साइन आउट नगरिकन स्वतः साइन आउट भएको थियो भने तपाईको डाटा पनि ह्याकरले प्राप्त गरेको मान्न सकिने देखिन्छ ।
याे पनि पढ्नुस अमेरिकाका सबै ५० वटा राज्यद्वारा गुगलको एकाधिकारबारे अनुसन्धान गर्ने घोषणा
कसरी गरे डाटा ह्याक
ह्याकरहरुले फेसबुकमा रहेको भ्यू एज (View as) फिचरका माध्यमबाट फेसबुकको एक्सेज टोकनहरु चोरी गरेका थिए । यी टोकनहरुको प्रयोग पछि गएर फेसबुकका एकाउण्ट खोल्नमा गर्न सकिन्थ्यो ।
भ्यू एज (View as)फिचरका माध्यमबाट फेसबुक युजरहरुल्े अरु प्रयोगकर्ताले आफ्नो प्रोफाइल कस्तो देख्नेछन भनेर थाहा पाउन सक्थे ।
एकाउण्ट ह्याक भएको थाहा पाएपछि फेसबुकले सबै (View as) एक्सेस टोकन परिवर्तन गरेको छ । यतिमात्रै होइन सावधानी अपनाउन फेसबुकले गत वर्षभरि भ्यू एज विकल्पबाट हेरिएका अन्य चार करोड एकाउण्टको एक्सेस टोकन पनि रिसेट गरेको छ ।
याे पनि पढ्नुस फेसबुकले दिलायो फूलकुमारीलाई नयाँ जीवन
नीजि डाटा लिक हुने कुरामा फेसबुक बारम्बार विवादमा आउँदै गरेको छ ।
गत वर्ष एउटा ब्रिटिश एनालाइटिक्स फर्मलाई ८.७ करोड प्रयोगकर्ताका नीजि डाटा दिएको खुलासा भएको थियो । चुनावमा गलत सूचना दिएर परिणाममा असर पर्न खोजेको पनि आरोप लागेको थियो ।